Fisandratana 2030 : Resy lahatra ny Diaspora tao Frantsa -
AccueilRaharaham-pirenenaFisandratana 2030 : Resy lahatra ny Diaspora tao Frantsa
24/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nisy ny fihaonan’ny avy amin’ny antoko HVM ao Frantsa tamin’ireo teratany malagasy monina sy mipetraka any an-toerana, ny sabotsy 3 marsa lasa teo. Tamin’izany indrindra no namelabelaran’ny avy amin’ny HVM Frantsa ny zava-bitan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tao anatin’ny 4 taona nitantanany ny firenena sy mahakasika indrindra ny vina « Fisandratana 2030 ».
Nambaran’izy ireo nanoloana ireo teratany malagasy marobe tonga sy namaly ny fanasana tamin’izany fa efa tarigetran’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina efa hatramin’ny nandraisany ny fitantanana ny firenena ny fampisandratana an’i Madagasikara.
Notsindrian’izy ireo fa dingana voalohany amin’izany « Fisandratana 2030 » izany ny drafi-pirenena ho amin’ny fampandrosoana, na ny PND (Plan national de développement). Izany dia efa natomboka ny taona 2015 hatramin’ny taona 2019. Ny PND mantsy, hoy izy ireo tamin’ny fanazavany dia drafitra nentina indrindra hivoahana amin’ny krizy ara-toekarena sy sosialy, ary hiadiana amin’ny fahantrana. Tsy vitan’ny fanazavana am-bava ihany mantsy izany fa notohanan’izy ireo tamin’ny horonantsary sy ny tarehimarika avy amin’ireo minisitera tsirairay.
Nohazavain’ny HVM Frantsa fa ny hitondrana ny firenena ho sangany sy hamirapiratra aty amin’ny Ranomasimbe Indianina mantsy no tanjon’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny alalan’io vina « Fisandratana 2030 » io. Mametraka planina maty paika, voahevitra sy mirindra ary miainga amin’ny fampiroboroboana ny herijika isam-paritra.
Ankoatra izay, nanararaotra ny fandalovany tany Frantsa ihany koa ny Ben’ny tanàna avy amin’ny Faritra Vakinankaratra, izay nitondra fanazavana sy famelabelarana ny zava-bitan’ny Fitondram-panjakana tany amin’iny Faritra iny, toa ny fanampiana ara-tsosialy, fanamboaran-dalana sy sekoly ary fotodrafitrasa maro.
Voalaza fa niara-niaiky ireo malagasy mipetraka any ivelany nanatrika ny famelabelarana narahina horonantsary fa goavana ny zava-bitan’ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina tao anatin’izay 4 taona izay.
Nambaran’ny HVM Frantsa fa tsy asan’ny Filoham-pirenena irery ny fampandrosoana sy fampisandratana ny firenena, fa mila mifanome tanana ho amin’izany ny rehetra.
Etsy andaniny, notsindrinan’izy ireo fa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina no manana drafitra sy lamina maty paika hitondrana ny firenena ho amin’ny fandrosoana maharitra sy mirindra.